Aragtidii Hoggaamiye Cigaal ee Qalalaasaha Soomaaliya iyo mowduucyo kale oo xiiso leh..
“Xaq la duudsiyi maayee,
Haddaan lays dafireynin,
Nin kastaa ha dumaalo e’,
Adigawgu da’ weyn,
Sida doollida hoorta,
Ninna soo di’I maayoo,
Dooxyo soo rogi maayoo,
Durdur liin iyo dhey ah,
Cidina u dudi meyso e’,
Dulqaad uu hayinoobuu,
Wax ku deeqi karaa,”
Maansadii, ‘Adaa noo Duq ahaa’ ee Timacadde, 1968kii, Hargeysa,
Qalinka: Boobe Yuusuf Ducaale: www.dharaaro.com
11 sannadood ayaa ka soo wareegtay markii la soo gebagebeeyay aaskii, baroor-diiqdii iyo tacsidii Hoggaamiyihii, Madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane, Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal oo 3/5/2002dii ku geeriyooday cisbitaal ku yaal magaalada Pretoria ee dalka South Africa. Marxuum Cigaal 6/5/2002dii ayaa si aad u sarreysa oo heer Qaran ah loogu aasay magaalada Berbera iyada oo la raacayo dardaarankiisii ahaa in aabbihii oo Berbera ku aasan, xabaashiisana laga ag qodo oo isagana lagu duugo. Naxariistii Janno Alla ha siiyo, innagana dhammaanteen samir iyo iimaan ha inaga siiyo. Dhammaanteen marka aan leeyahay waxa aan uga jeedaa gaar ahaan Somaliland, guud ahaanna dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba. Waayo? Cigaal ma ahayn oo keliya hoggaamiyaha Somaliland bal se sida ka muuqatay tacsidiisii iyo baroor-diiqdiiba wuxu ahaa hoggaamiye Soomaaliyeed, halyey Geeskan Afrika u dhashay, hoggaamiye qaaraddan Afrikan ka dhashay. Geeridii Cigaal iyada oo naxdinteeda lahayd, haddana waxaanu shaki ku jirin in ay milge iyo maamuus aan hore loo ogeyn u yeelatay Cigaal iyo shacbiga Somalilandba. Gude iyo dibadba waxa ka curtay dareen ididiilo leh oo dadkii isu soo dhaweeyay.
Ma hawl yara sida Cigaal wax looga qoraa. Haddii aad damacdo in aad Cigaal wax ka qorto waa in aad u badheedhaa konton sannadood iyo waxyaabihii ka dhacayay saaxadda siyaasadeed ee Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaanna ta Somaliland. Intaas oo keliya ma aha e’, waa in aad u tafo-xaydataa wax-ka-qoridda shakhsiyaddii ballaadhnayd ee Cigaal oo mar walba ku lammaanayd. Waa hawl mudan baadhis iyo xog-urursi qoto dheer. Anna maanta taa, uma soo ambo-bixin.
Waxa aan jeclahay Qormooyinkan in aan si sar-ka-xaadis ah wax uga taataabto aragtidii Cigaal ee ku wajahnayd Qalalaasha Soomaaliya iyo mowduucyo kale oo aad xiisayn kartaanba. Qormooyinkan waxa aan baroor-diiq, xus iyo maamuusba uga dhigayaa Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal oo suulkiisii iyo saxeexiisiiba kaga tegay saaxadda siyaasadeed ee Soomaaliyeed, Geeska Afrika iyo guud ahaanba qaaradda Afrika.
Waxa kale oo aan si kooban oo guud-mar ah u dul carari doonaa aragtiyihii kala duwanaa ee Hooggaamiye Cigaal ka lahaa qaybo badan oo saameeya wejiyada badan ee waayaha Soomaaliyeed iyo Somalilandba.
Maqaalkan, qaybtiisa danbe waxa kale oo aan si guud-mar ah ugu qiimayn doonaa sidii Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho, loogaga baroor-diiqay geeridii Cigaal. Waxa aan ku yar hakan doonaa dhacdadii Hotel Shaamow oo Muqdisho ku yaal, halkaas oo 8/5/2002da tacsi loogu sameeyay geeridii Hoggaamiye, Madaxweyne Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal.
“Oo weli timahaagu waa madow e’.” Inta uu ilko-caddeeyay oo madaxa ii salaaxay ayuu igu yidhi: “Jihaadka ayaa idin caddeeyay.” Waxa ay ahayd markii iigu horreysay ee aan noloshayda gacan-qaado lana sheekaysto.
Intii danbe Boorame ayaan kula kulmi jiray oo muddo bilo ah uu ka socday Shirweynihii 1aad ee Guurtidu oo Cigaal loogu doortay Madaxweyne, Meey 1993kii. In badan ayaanu halkaa ku kulannay oo ku sheekaysannay, bal se aan u gudbo dhacdada aan u socday oo ah mar aanu Addis Ababa wada tagnay bishii Maarj 1993kii.
Maarj 1993kii waxa magaalada Addis-Ababa lagu qabtay wareeggii 2aad ee shirar ku suntanaa Dibuheshiisiinta Soomaaliyeed oo ay soo qabanqaabiyeen Qarammada Midoobay oo beryahaa Xoghaye Guud uu ka ahaa Butrus Qaali oo ku dhex ambaday Qalalaasaha Soomaaliyeed, raad-gadka loo maareyn la’ yahayna kaga tegay. Wareeggii 1aad waxa la qabtay bishii Jeeniweri 1993kii waxaana ka soo qayb galay Butrus Qaali iyo wefdi uu hoggaaminayay, si aan mugdi ku jirinna waxa u muuqatay sida aan qarsoodiga ahayn ee Butrus Qaali u af-duubayay qadiyadda Soomaaliyeed. Shirarkaa waxa isugu iman jiray Ururrada Siyaasadeed ee Soomaaliya, ururka SNM-na waxa uu u tegi jiray goob-jooge ahaan. Labadaa shirba waan ka qayb galay.
In yar haddii aynu dib u noqonno, 1991kii markii Somaliland lagu dhawaaqay Cigaal mar ayuu soo gaadhay Burco oo lagu shirsanaa. Isla sannadkaa, Jabuuti waxa uu kaga qayb-galay laba shir oo ahaa dibuheshiisiin Soomaaliyeed oo go’aammadii ugu mudnaa ee ka soo baxay aynu ka xusi karno:
Goobta lagu shirayay waxa ay ahayd ‘Hall’-ka shirarka ee ECA-da ee ku yaalla Addis- Ababa. Qol bilicsan oo aad looga shaqeeyay ayuu ahaa. Waxa uu ahaa wareeg ama gool badhkii oo kala sarreeya, goob-joogayaasha oo hay’adaha diblomaasiyadeed ee Addis-Ababa jooga ahaa wareegga ugu sarreeya ayay fadhiyeen. Wareegyada hoose waxa fadhiyay ergooyinka Ururrada Soomaaliyeed oo mid walba warqad magaca Ururka muujinaysaa hor taallay. SNM ahaan waxa aanu fadhinay wareeggaa hoose dacalkiisa bidix, waxaana naga yar shisheeyay oo meel naga yar sarreysa kuraasidan la qaado loo dhigay wefdigii Guurtida Somaliland oo Cigaal ku jiray.
Qolkii shirka ayaa lagu soo noqday. Liyonaardo Kapuungu ayaa isaga oo faraxsan u kacay dhankii ay Guurtida Somaliland fadhiday. Markiiba wixii weriyayaal joogay ayaa iyaguna dhankaa u ruqaansaday. Laambado aan tiro lahayn ayaa la soo riixay oo la shiday. Makrifoonnadaa ka darnaa. Miiskii shir-guddoonka ayaa lagaga dhawaaqay in uu hadal jeedin doono Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal, oo Ra’iisal-wasaare Soomaaliya hore uga ahaan jiray. Sacab iyo sawaxan ayaa lala oogsaday. Cigaal ayaa hadalkii bilaabay. Markii hore af-ingiriisi ayuu cabbaar ku hadlayay, markii danbena af-Soomaali ayuu u rogtay. Aniga oo aan hadalkiisii oo dhan halkan ku soo wada qaadayn, waxa aan jeclahay in aan soo garoocdo.
Dadka meesha fadhiyay wixii aan af-Soomaaliga qoon, waa loo tarjumayay oo samaacado ayaa dhegaha ugu jiray. Kolleyba inta aan xusuusto afafka wax lagu tarjumayay waxa ay ahaayeen: Ingiriisi, Faransiis iyo Carabi. Intaa markii uu yidhi ayaa buuqii sii batay. Liyonaardo Kapuungu ayaa u tegay Shir-guddoomiyihii oo ahaa nin diblomaasi ah oo reer Gini ah oo la odhan jiray Ambassador Lanzana Kouyate oo beddelay ninkii la odhan jiray Admiral Howe.
Liyonaardo Kapuungu ayaa si cadho leh u soo dhaqaaqay oo weriyayaashii Cigaal hor tubnaa inta uu askar soo kaxaystay qasab kaga dhaqaajiyay halkii ay taagnaayeen ee Cigaal hortiisa ahayd. laydhadhkii Cigaal ku shidnaana waa la bakhtiiyay. Laakiin makrifoonkii uu shirka kula hadlayay lagama bakhtiin. Rikoodh yar oo aan sitay oo Cigaal hor yaallay ayaan inta aan kacay makrifoon sudhay oo aan Cigaalna makrifoonkii raqabaddii shaadhka ugu xidhay. Khudbaddaa inteedii danbe cajaladdaa ayaanu ku duubannay.
Annagu waxa aanu ku soo noqonnay Qolkii lagu shirayay. Markiiba warqad martiqaad iyo ogeysiis isugu jirtay oo af-Ingiriisi ah ayaanu garaacnay. Dabaqii hoose oo waraaqaha lagu badin jiray ayaanu la tagnay. Markii aanu soo badsannay waxa aanu la dhex qaadnay Qolkii shirka, wefdiyadii, diblomaasiyiintii iyo weriyayaashii caalamiga ahaa iyo kuwii gudahaba. Waxa aanu qabanqaabinnay shir-jaraa’id oo Cigaal ku qabanayo Hotel Afrique galabnimada oo si faahfaahsan ugaga hadlayo Qalalaasaha Soomaaliyeed iyo sida loo maaraynayo.
Ninkii gaaggaxshaa tee.”
Ma-naxaannadii baan arladan, meerisna u toline,
Marnaba yaydinaan dhicin kuwii, male ku soo goostay,
Miyigeenna nimankii mindida, meel walba u dhiibay,
Nimankii mashaqadey dhigeen, reerba dhan u moosay,
Suntay nagu mudeen wiilashii, lays martiyi waayay,
Muddaahanada beenta ah kuwii, nagu maqaar-saaray,
Mas waabaydii lama dhuunyadiyo, midho-dhunkaaleede,
Manfac aan la cunin baa jiroo, mawdka kuu sida e’,
Maraykan iyo waa kay baxshaan, madaxda Naato e’,
Nimankii mabda’a reer Galbeed, nagu maddiiddeeyay,
Haddii maamulkii hore dhintoo, maasuq lagu beeray,
Marka aanad hammoon noloshu waa, mooyi dabadeede,
Soomaaliyi ha midowdo wax badan oo ka hooseeyay ma jirin, cawaaqibkeediina waa aynu aragnay. Is-raacii berigaa la raadinayay ninka maanta doon-doonayaa waa qof riyoonaya. Waxyaabo badan ayaa is-beddelay oo aanan jeclayn in aan waqti iskaga lumiyo.
Maanta hadal-hayntu waxa ay taagan tahay labadii dal ee ku mideysnaa Jamhuuriyaddii Dimuqraadiga ahayd ee Soomaaliyeed. Somaliland maa daama ay iskeed Soomaaliya u raacday, iskeed ayay 18kii Meey 1991kii ula soo noqotay madax-bannaanideedii. Waa xaq ay leedahay oo aanay cidina ka qaadi karin.
Sidii ay wax ahaan jireen ma ahaanayaan, mana aha oo waa ay caddahay. Cigaal waxa uu u arkayay maareynta Qalalaasaha Soomaaliyeed in laba loo kala qaado: Somaliland iyo Soomaaliya. Wuxu lahaa Somaliland wax baa ka dhismay e’, in arrinta Soomaaliya maaro loo helo, ka dibna iyaga oo laba dal oo xor ah oo jaar ah ay aayahooda ka wada tashadaan. Sidaa waa uu ku shaqeeyay oo cidna caad kama saarna.
Cigaal intii uu hayay hoggaanka Somaliland wax faro-gelin ah kuma yeelan Qalalaasaha ka taagan Soomaaliya oo kooxna gacan-saar lama lahayn, kooxna colaad gaar ah uma hayn. Soo-dhawayn iyo sooryaba waa uu u geystay intii Hargeysa ugu timid iyada oo aanay dad badani raalli ka ahayn. Cigaal kama aammusnayn masiibada Soomaaliya ka taagan e’ in badan ayuu ku dedaalay in uu ka hawl galo sidii maaro loogu heli lahaa. Dalalka aynu deriska nahay ee ku bahoobay IGAD oo arrinta Soomaaliya gacanta ku hayay af iyo qoraalba waa uu ku weydiistay haddii aan loo oggolayn in Somaliland xubin ka noqoto in loo oggolaado in ay talo-bixin ku yeelato maareynta masiibada Soomaaliya ka taagan. Wax qarsoodiya ma ahayn.
Maareynta Qalalaasaha Soomaaliya ka taagan Cigaal wuxu u arkayay in ay tahay arrin u taalla dadka Soomaaliyeed ee masiibadaasi haysato. Aragtidiisu waxay ahayd in xalku gudaha yaal ee aanu dibad ka iman. Wuxu u arkayay in ay dersaan oo ay wax ka qaataan waayo-aragnimada hodanka ah ee Somaliland. Wuxu heegan la ahaa hiil iyo hooba in ay maamulkiisa, Golayaasha Qaranka iyo guud ahaanba shacbiga Somaliland ka geysan doonaan.
Cigaal qorshihiisii ku beegnaa maareynta masiibada Soomaaliya waxa uu si cad u soo bandhigay shirkii Carta ka hor isaga oo si aan mugdi ku jirin ugu marti-qaaday Hargeysa dhinacyada Soomaaliya isku haya, oo weliba intaa raaciyay in uu diyaar u yahay ergooyin gaadhaya ilaa 500 oo qof oo inta ay hawlahooda dhammaysanayaan fadhiya, kharashkana ay Somaliland qabto. Wuxu deeqdaa ugu daray in aanay Somaliland ku masuugi doonin waayo-aragnimadeedii ee ay ergooyinka iyo dhinacyada is-haya ku soori doonto. Qorshahaasi markii danbe waa kii Jabuuti u wareegay sida la aamminsan yahay.
Cigaal sida uu u arkayay Qalalaasaha Soomaaliyeed waxa uu markii ugu danbaysay ku xaqiijiyay dareenkii af iyo qoraalba ahaa ee uu siiyay wefdigii ugu danbeeyay ee ururka IGAD ee u socday qabanqaabada shirkii Nayroobi lagu qabtay 2004kii. Cigaal wuxu mar kale caddeeyay in aanay Somaliland qayb ka noqon doonin ee ay tahay in shirkaa lagu heshiisiiyo dhinacyada isku haya Soomaaliya ka dibna la wada hadli doono iyada oo laba dal oo deris iyo xorba ah la yahay. Sidaas ayuu ku god-galay, naxariistii Janno Alle ha siiyo e’.
Waxa kale oo iyaduna xus iyo xusuusba mudan in uu Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal soo bandhigay aragti cusub oo uu ka yeeshay qaabka lagu xoreynayo ama ay ku xoroobayaan dalalkii ama gobolladii kale ee Soomaaliyeed ee la haystay ee saddexda maqan ahaa. Aragtidan cusub wuxu ku soo bandhigayaa Shir ka dhacay magaalada Caruusha oo ku taal dalka Tanzania. Waxay ahayd mar Madaxweynihii Zambia ee Keneth Kaunda halkaa ku wada-hadashiinayay Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal oo Soomaaliya u ahaa Ra’iisal-wasaare iyo Jomo Kenyata oo Madaxweyne u ahaa dalka Kiiniya. Waxay ahayd 1967kii.
Berigaa Cigaal wuxu soo jeediyay aragti cusub oo ay dadka qaarkii ku naqdiyeen, qaarna ku taageereen. Wuxu soo jeediyay in ay dadyowga dalalka Soomaaliyeed ee maqani qaadaan mas’uuliyadda ay dalalkooda ku xoreynayaan, Jamhuuriyadda Soomaaliyeedna ay taageerto, laakiin aanay safka hore gelin.
Maxamed Siyaad Barre, aragtidan wuxu ku soo bandhigayaa Khudbaddiisii 10-guuradii Inqilaabkii uu talada dalka ku maroorsaday. Buuq iyo sawaxan badan ayay ka dhex-dhalisay Golihii Dhexe ee Xisbigii Hantiwadaagga Kacaanka Soomaaliyeed. Waxaan xusuustaa in ay aad uga xanaaqeen xubnihii Golaha Dhexe ee XHKS ee ka soo jeeday gobolka Ogaadeeniya.
Marka aynu intaa ku soo dhaafano Aragtidii Cigaal ee Qalalaasaha Soomaaliyeed, waxaan jeclahay in aynu u gudubno, aragtidii Cigaal ee qaybo badan oo nolosha ka mid ah.
Cigaal marka aynu ka hadlayno, waxaynu ka hadlaynaa Hoggaamiye ee kama hadlayno Madaxweyne ama Ra’iisal-wasaare keliya. Madaxweyne sida lagu noqdaa waa ay ka fududdahay sida lagu noqdo Hoggaamiye. Madaxweynaha waa loo codeeyaa, laakiin Hoggaamiyaha looma codeeyo. Hoggaamin la mahadiyay iyo hawl-gal togan yaa lagu noqdaa hoggaamiye ummadeed.
Sidii aynu kor ku soo sheegnay, Madaxweyne Cigaal waxa lagu doortay Boorame. 1993kii iyada oo la siiyay laba sannadood oo kala-guur ah oo lagu soo diyaarinayay Dastuur Qaran. Muddadaa labada sannadood ahayd ayay suuro-geli weyday in Dastuurkii lagu diyaariyo, ka dibna labada Gole ee Xeer-dejinta ayaa u kordhiyay 18 bilood oo kale. Weedhan ‘Cahdiga Cusub’ wuxu kaga hadlayaa muddadaas loo kordhiyay iyo hawlaha hor yaal, waxaanu yidhi:
Halkan, waxaynu ka dheehan karaynaa aragtidii Cigaal eek u saabsanayd Qodobka: 83aad ee Dastuurka ee aynu ku dawakhnay ee muddo-kordhintii noqotay tusbax furtay oo aan dhammaad lahayd. Bal u fiirsada werwerka iyo walaaca uu ka qabo muddo-kordhinta.
“Ma oggolin in cid I hoggaan gashato sidii lixdankii la inoo jiho-wareeriyey, mid ina neceb iyo mid ina jecelba caalamka dood ayaanu la yeelanaynaa, siday odhan jirtay Soomaalidu: “Oodi qaadis iyo jiidis waa isla guri-geyn.” Waxa muqaddas ah oo aan ka leex-leexasho lahayn oo aan (Compromise) geli karin ujeeddada qudha ee aynu kulligeen wada qabno ee aynu kuwada soconno taas oo ah in ay Somaliland jirto, oo joogto iyada oo madax-bannaan oo xor ah oo qaran siyaasiya leh oo mujtamaca caalamka ka mid ah, taa weeye waxa muqaddaska ah, meelba se sida loogaga dhirin-dhirinayo ee looga hir-gelinayaa waxay ku xidhan tahay, hab-siyaasadeedka duruuf waliba ka dhigto daruuri, mid la isu dhul-dhigo, mid dhiif lagu wajaho.”
Hoggaamiye/Madaxweyne Cigaal 1997kii mar uu dadweynaha kala hadlayay dareenkooda iyo sida ay u mooggan yihiin danahooda, iyada oo la dul joogo lafihii Malko-durduro ee daadku soo saaray, Odeyga waxa laga guntay:
“Dowladnimadeennu ilaa maanta waxay ku dhisnayd hab beelo ka soo baxay, ilaa maanta aynu meel fiican ku gaadhnay, hab-beeleedkii aynu aasaaska uga dhignay dowladnimadeenna, halkii uu nidaamkaasi ina gaadhsiin karayeyna dhamaadkiisii ayeynu maanta joognaa. Waxa loo baahan yahay in aynu maanta tallaabadii labaad qaadno, oo qabiil qaran ku beddelno, ‘cahdiga’ maanta dhamaaday mid loo baahnaa ayuu ahaa, oo ay lagama maar-maan ahayd in aynu ku dhaafno oo kaga baxno ‘fowdaddii’, qaskii iyo isku-taagnidii ay xabbaddu iskugu keen jirtay ee qoloba qolo hiifsanayd ee hagar-daameynaysay.”
Cismaan Jaamac inta uu makrifoonkii qaatay ayaa wuxu yidhi waxa aan ka sheekeynayaa wixii uu jeclaa Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal iyo nimanka qaban doona hoggaanka Somaliland. Cismaan Jaamac hore uma aqoon Cigaal, immikana ma aqoon. Hore uma aqoon oo Cismaan Jaamac oo wuxu la kowsaday Siyaad Barre. Cigaalna waa uu xidhnaa baa lagaa yidhi. Intii uu Cigaal Somaliland hoggaaminayayna Cismaan dalka cag ma soo dhigin oo London ayuu iska deggenaa. Halkee ayuu Cigaal iyo wuxu jecel yahay ku yaqaannay? Bal adba.
(Qormooyinkan waxaan qoray maalintii Cigaal la aasay 11 sannadood ka hor. Waan yar nakhtiimay waxna waan ka yar beddelay ama ku kordhiyayba.)
← Hadimiyo Hantaaq (Naqdi kooban: Buugga Cabdillaahi Yuusuf ee Halgan iyo Hagardaamo
Khudbadda Xafladda Xil-wareejinta Wasaaradda Warfaafinta iyo Wacyi-gelinta (19ka Maarj 2012ka) →